Xoghayaha Maamulaha Dalxiiska ee Seychelles wuxuu soo bandhigayaa mudnaanta waaxyaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Xoghayaha Maamulaha Dalxiiska ee Seychelles wuxuu soo bandhigayaa mudnaanta waaxyaha
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Investments • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Xogheyaha Seychelles ee Dalxiiska
Markii ay u gudubtay doorkeeda cusub ee Xoghayaha Seychelles ee Dalxiiska, Mrs. Sherin Francis waxay la kulantay wada-hawlgalayaasha saxaafadda maxalliga ah Botanical House Arbacadii, Juun 30, si ay ugu soo bandhigaan mudnaanta waaxda ee dalxiiska dalxiiska iyo inay ka wada hadlaan isbeddelada waaxda iyo shaqadooda .
Waaxda waxaa loogu yeeri doonaa Dalxiiska Seychelles sababo ganacsi awgood ayaa lagu dhawaaqay Xogheyaha Guud ee Dalxiiska Seychelles.
Saddex qaybood oo waaweyn ayaa ka koobnaan doona Waaxda Dalxiiska ee dawladda.
Ujeedada maamulka cusub ayaa noqon doonta sare u qaadida qanacsanaanta macaamiisha iyadoo la sifeynayo taageerada ay siiso warshadaha safarka iyo dalxiiska.
Mrs. Francis waxay sheegtay in isbedelada ka dhacaya gudaha dalxiiska dalxiiska aysan saameyn ku yeelan doonin magaca Seychelles laakiin sababo ganacsi awgood, waaxda loogu yeeri doono Dalxiiska Seychelles.
Markii ay soo bandhigeysay isbedelada ugu muhiimsan, xoghayaha guud waxay xustay in ka sakow xoghaynteeda, oo mas'uul ka noqon doonta PR iyo isgaarsiinta iyo iskaashiga caalamiga, waaxda dalxiiska waxay ka koobnaan doontaa seddex qaybood oo waaweyn.
Waxay sharraxday in labada qaybood ee waaweyn ee waaxda, oo ay ku jiraan Qaybta Suuqgeynta Goobaha iyo Qaybta Qorshaynta iyo Horumarinta, ay midba midka kale ka kaalmayn doonaan shaqooyinkooda.
Iyadoo la siinayo aragtida ahmiyadaha ay waaxda cusub diiradda saari doonto, Mrs. Francis waxay sheegtay in qorshayaasha oo dhan la sameynayo iyadoo la tixgelinayo mudada adag ee ay warshaddu wajahayso. Iyadoo la raacayo dib-u-habeynta, mudnaanta ayaa ah in la raadiyo aagagga ay waaxdu si macquul ah uga fahansan karto kheyraadka si loo hubiyo wax-ku-oolnimada dhammaan howlaheeda iyada oo la raacayo qaab-dhismeedka sharciyeynta warshadaha.
Ujeedada maamulka cusub ayaa noqon doonta in la wanaajiyo qanacsanaanta macaamiisha iyadoo la sifeynayo taageerada ay siiso warshadaha iyada oo loo marayo tababar iyo barnaamijyo kale oo gacan ka geysanaya hagaajinta heerarka adeegga.
Meel kale oo fiiro gaar ah leh ayaa wax looga qabanayaa dulduleelada jira ee siyaasadaha dalxiis ee hadda jira ama istiraatiijiyado. Dib u eegis lagu sameynayo siyaasadaha dalxiiska ee loogu talagalay adeegyada kaladuwan ee waaxda ayaa la qaban doonaa, ayuu yiri PS Francis, si loo hubiyo in dhammaan xeeladaha ay u adeegaan baahiyaha hadda jira, gaar ahaan marka la eego aafooyinka iyo dalxiisyada cusub ee soo koraya. Sida laga soo xigtay Mrs. Francis, tani waxay muhiim u tahay fududeynta kala-duwanaanta wax soo saarkayada.
Marka la fiiriyo sida ay uga go'antahay waaxda inay sare u qaaddo khibrada macaamiisha, PS for Dalxiiska waxay sheegtay in waaxda ay sameyn doonto tiro koob ku saabsan xarumaha iyo adeegyada la siiyo dalxiisayaasha Seychelles gaar ahaan meelaha soojiidashada, goobaha, iyo khibradaha. Layligani waxaa lagu fulin doonaa iyadoo lala kaashanayo daneeyayaasha kala duwan waxaana lagu hubin doonaa helitaanka iyo tayada xarumaha dalxiiska iyo adeegyada.
Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan ogaano meelaha ay ka banaan yihiin si aan kor ugu qaadno tayada wax soo saarkeena dalxiis taasoo iyadana noo oggolaaneysa inaan balaarino baaxada suuq geynta, khibrada soo booqdeyaasha iyo dakhli soo saarista. Tani waxay sidoo kale naga caawin doontaa in aan aqoonsanno aagagga suurtagalka u ah kobaca Adeegga la siiyo dadka soo booqda waxayna naga caawinaysaa in aan si wanaagsan u marinno maalgashiga warshadaha.
Mar ay soo bandhigeysay meel muhiim ah oo walaac laga qabo, Mrs. Francis waxay ku talisay in qiimeyn la sameyn doono si loo fahmo arrimaha muhiimka u ah arrimaha shaqaalaha waaxda dalxiiska ee Seychelles. Waaxdu waxay la shaqeyn doontaa iskaashi dhow wasaaradda ay khuseyso si loo ogaado sababaha keenay shaqaale badan iyo wax soo saarkoodu hooseeyo iyadoo la doonayo in la dejiyo tallaabooyin sixitaan ah.
Waaxdu waxay sii wadi doontaa dadaalkeeda ku saabsan wacyigelinta calaamadaha joogtada ah, ka qayb qaadashada dijitaalka iyo xoojinta joogitaanka Seychelles ee warbaahinta bulshada, PS Francis ayaa kula taliyay, iyada oo xaqiijinaysa in fiiro gaar ah la siin doono sirdoonka suuqa, tirakoobka iyo fikradaha xogta la wadey
Xiritaanka PS Francis wuxuu sheegay in si dhab ah loo xaqiijiyo qorshayaasha ay jiraan dhowr meelood oo lama huraan ah oo shuraako ah in la ilaaliyo lana taageero oo isugu jira kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah. Wadashaqeynta socota iyo wadahadalka lala yeelanayo hay'adaha kale ee dowladda laga bilaabo sharci dejinta ilaa dejinta siyaasaddu waa lama huraan, si loo hubiyo in dhammaan howlaha gacan qabashada ama adeegyada si horay loogu socdo warshadaha ay iswaafajiyaan.